Ii-Biogas ziveliswa yimfungumfungu yezityalo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ii-Biogas ziveliswa kwintsalela yezityalo
IsiJamani sasePortillo | | Biogas
Namhlanje kukho iindlela ezininzi zokuvelisa amandla ngokusebenzisa inkunkuma yazo zonke iintlobo. Ukusetyenziswa kwenkunkuma njengezixhobo zokuvelisa amandla yindlela elungileyo yokonga kwimathiriyeli ekrwada kunye nokunceda ekupheliseni ukuxhomekeka kwizibaso.
Ujongilanga waseMexico uthathwa njengesityalo esingafunekiyo kwiindawo ezahlukeneyo eAfrika, eOstreliya nakwezinye iziqithi ezikulwandlekazi lwePasifiki. Ewe, abaphandi abavela kwiiyunivesithi ezimbini zaseNigeria bebesebenza kwisifundo esikhuthaza ukuveliswa kwebiogas kunye nokuphuculwa kokusebenza kwelindle leenkukhu kunye nelijongilanga lingenelelayo.
1 Yenza i-biogas kwaye wandise ukusebenza ngokukuko
2 Ukusebenza ngokukuko kunyango lwangaphambi konyango
Yenza i-biogas kwaye wandise ukusebenza ngokukuko
Ukuvelisa i-biogas kwilindle leenkukhu zase-Mexico kunye nojongilanga ngumbono olungileyo, kuba sigqiba ngeengxaki ezimbini ezinkulu: unyango lweentsalela zefama kunye nosongelo kwiintlobo zemveli ezibangelwa ngujongilanga waseMexico. Ngaphambili, eNigeria nase China, uphando belusenziwa ukuze kubanjwe le biogas. Umbono kukususa ukuhlasela kwesi sityalo kwiindawo apho sithatha khona iintyatyambo zemveli kuba bobabini abaphandi baseyunivesithi kunye ne-IUCN (International Union for Conservation of Nature) iqela elikhethekileyo kwizilwanyana ezingenayo zibonisa ukuba ojongilanga bayingozi kakhulu kwezinye iindawo zendalo.
INigeria lelinye lawona mazwe achaphazeleka kakhulu kwesi sityalo kwaye yiyo loo nto bengayeki ukukhangela ezinye iindlela zokumisa ukwandiswa kwayo. Ukongeza, abazami nje kuphela ukuphelisa esi sityalo kodwa bazama nokusebenzisa inkunkuma yaso. Uphononongo olwenziwe ziiyunivesithi zeLandmark kunye noMnqophiso, epapashwe kwiphephancwadi Amandla kunye neFutha, ibonisa ukuba iintsalela zelanga zikajongilanga zinobuchule obukhulu kwimveliso yebiogas. Oku kwenzeka ngenxa yokudityaniswa kokutyalwa kukajongilanga waseMexico kunye nentsalela yefama yenkukhu ngonyango lwangaphambili.
Ukusebenza ngokukuko kunyango lwangaphambi konyango
Zininzi iindlela zokuvelisa i-biogas. I-Biogas inokusetyenziselwa ukuvelisa amandla kuba inexabiso eliphezulu le-calorific. Uphononongo luphande unyango lwangaphambi kwenkunkuma yenkunkuma kunye nentsalela kajongilanga wase Mexico ukuya konyusa isivuno kwimveliso ye-biogas engaphezulu kwama-50%. Ukugqitywa kophononongo kubonakalise ukwanda kwe-54,44% kwisivuno se-biogas esivela kuvavanyo apho kwenziwa unyango langaphambi kokuthelekiswa nolo lwalungazange luphathwe ngaphambili.
Ukufumanisa ukuba ukusebenza ngokukuko kugubungela amandla asetyenzisiweyo kunyango lwangaphambi kwexesha, ibhalansi yamandla iyenziwa. Kwibhalansi yamandla, amandla angena kule nkqubo afundwayo, kunye nezinto eziyimfuneko kuzo zonke iinkqubo zokuvelisa i-biogas, kunye namandla ashiya inkqubo nawo alinganisiwe. Ngale ndlela, unolawulo olupheleleyo kwimveliso kunye nasekusebenziseni amandla ngawo onke amaxesha.
Ewe, kwibhalansi yamandla eyenziwayo, kwaqwalaselwa ukuba Amandla omnatha ayenethemba kwaye kwanele ukuhlawulela ngokwaneleyo amandla ashushu nawombane awayesetyenziselwa ukwenza unyango lwe-thermo-alkaline pre-unyango.
Gcina ukhumbula ukuba inkunkuma yeenkukhu inokuba nayo izondlo, iihomoni, ii-antibiotics kunye nezinyithi ezinzima exutywe emhlabeni nasemanzini. Konke oku kungangcolisa imihlaba kunye namanzi apho akhutshwa khona. Kungenxa yoko le nto ukusetyenziswa kwezi ndle kwimveliso ye-biogas kugwetyelwe ngokupheleleyo, nangona kuqatshelwe ukuba ngokwazo akunangeniso ukuziguqula zibe yi-biogas. Ukuze zisebenze ngokukuko, kufuneka zixutywe kunye nemifuno, njengejongilanga yaseMexico.
Okokugqibela, kukwakho nezinye izityalo ezingenelelayo kwamanye amazwe anje ngeMexico okanye iTaiwan apho baceba ukuguqula zibe zii-biofuels ezifana ne-ethanol kwaye zisetyenziselwa ukufundisisa ukusetyenziswa kwe-biomethane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Izinto eziphilayo » Biogas » Ii-Biogas ziveliswa kwintsalela yezityalo
yenzayo Iinyanga ze8
Ibe luncedo kakhulu.Ubuntu buswele inkcubeko yendalo.Enkosi
Amandla egagasi ngaphandle kokuphazanyiswa yiWaveStar
Amandla ahlaziyekayo eYurophu anjani?